Hadalheynta: Doolli ma taqaanaa? Ama Jiir dheh xitaa. - Somalia Focus
by admin | Wednesday, Mar 2, 2016 | 844 views
Doolli ma taqaanaa? Ama Jiir dheh xitaa. Haa Doolligaas ayaa beri hore oo hore cid gurigooda soo galay. Ciddu waxa ay ahayd mid aan weligeed bani aadam iyo geel mooyee nafle kale arag. Markii uu bahalkan yar guriga u soo dhacay, qof kasta oo qoyska ka mid ah halkiisa ayuu isku tuuray (seexday), si uu mayd isaga dhigo.
Adiga oo qolkaaga ku jira haddii aad maqasho dhaq-dhaqaaqa Doolliga ee aad adna hadasho, ma aragtay in uu aamusayo oo uu is dhakinayo? Haddaad u aamusto ama is hurdisana waa uu shaqaysanayaa. Sidaas oo kale, markii uu Jiirkii arkay cid dhan oo dhulka wada jiif jiifta, cabsidii waa ay daysay. Illaa iyo berigaasna isaga ayaa guriga ka madax ah.
Cidda wada jiifta, iyagu ma hurdayaan, ee cabsi ay waxan guriga ugu jira ka qabaan ayay la seexdeen. Dhibka ugu wayn ee jirana waa in aysan iyagu magac ku sheegi karin waxa guriga u soo galay ee ay ka baqayaan. Mana eegi karaan xitaa si ay u arkaan muuqiisa. Maalinba magac cusub ayay ula baxaan. Mar “Waa Libaax” ayay is yiraahdaan. Mar kalena “Maaha ee waa Shabeel”. Marna “Waraabe”. Nasiib xumaduna waxa ay tahay, in hadba wixii ay iyagu u arkaan, uu Doolligii isna isu arko.
Sidaas ay u dhakan yihiin, ayay u sugayaan fursad ay guriga uga cararaan. Maalinba mid iyaga ka mid ah ayaa isaga oo jiifa xagga albaabka u sii xamaarta oo carar jabsada.
Kuwii guriga ka cararay ayaa ciddii oo weli dhulka jiif jiifta soo waca, waxana ay su’aalaan “Weli sidii miyaad u jiiftaan? Horta wuxuu ma Doolliyaa? Hadda xagguu marayaa? Ma qolka mase Suulliga? Aaway Bisaddii may cunto? Dhibka dhan waa Bisad la’aanta aad markii hore na dhigteen. Ilaahay ayaa jooga. War is giijiya oo iska dila wuxu waa Doolli yare”.
Warkaas cid dheggeysanaysa ma jirto, saa sidii ay iyaguba xabadka ugu xamaarteen ayaa loo wada xamaaranayaa, jeer uu gurigani cidlo ka noqdo, oo Jiirku ku soo haro.
By: Mohamed Dhaaley.
Raisulwasaare Sharmarke oo lagu qasbay in uu hortago Baarlamanka
Dhageyso: Xaaladda Dhuusamareeb Degan iyo dhaq dhaqaayadii ugu dambeeyay